Wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidanka daraawiishta Puntland oo maanta u socdaali doona Muqdisho. – Radio Daljir
Wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidanka daraawiishta Puntland oo maanta u socdaali doona Muqdisho.
Galkacyo, Oct 26 ? Wafti ka socda dawladda Puntland ayaa lagu wadaa in ay u ambabaxaan magaalada Muqdisho kaddib markii ay casumaad rasmi ah ka heleen dawladda federaalka KMG ee Soomaaliya.
Waftigaan uu uu xoggaaminayo wasiirka amniga Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan, ayaa ka socda hay?adaha nabad-galyada Puntland waxaana ku weheliya socdaalkiisa taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Gen. Siciid Dheere, waxaana maanta ay ka dhoofi doonaan magaalada Galkacyo oo ay ku sugnaayeen labadii habeen ee ugu dambeeyey.
Ujeeddada socdaal ee saraakiishaan amni ay ku tagayeen magaalada Muqdisho ayaa salka ku haysa xoojinta wada-shaqayneed ee labada dhinaca, iyagoo sii ambaqaadi doona taabbo-galinta xiriir is-kaashi oo xagga amniga ku saabsanaa, kaasoo dhawaan Puntland iyo dawladda federaalku ay isla-meeleeyeen sida ay noo xaqiijiyeen ila-wareeddo kala duwani.
Bishaan dhex-deeda ayey ahayd markii ay Puntland yimaadeen wafti ka socda dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya kaasoo uu hoggaaminayey afhayeenka xukuumadda Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ?Yariisaw? kuwaasi oo Puntland kala hadlay arrimo la xiriira is-kaashiga xagga amniga iyo socodsiinta qorshe-dawladeedka ku aaddan xasilinta dalka.
Waftigaasi waxaa ka sii horreeyey wafti kale oo uu hoggaaminayey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gen. Cabdiqaadir Sh. Cali Diini, kuwaasi oo iyana halkaasi u tagay arrimo la xiriira amniga iyo tayeyn iyo tababaridda ciidamo Puntland ah.
Xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo hagaagayey kaddib markii la xalliyey mugdi iyo mad-madaw muddo ku dhex-taagnaa labada dhinaca, kaasoo dhaliyeyba in Puntland ay ku dhawaaqdo jiritaan xiriirkii ay la lahayd federaalka.